Hay’adda World Vision oo Tababar U Soo xirtay 100 Arday-Sawiro • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Hay’adda World Vision oo Tababar U Soo xirtay 100 Arday-Sawiro
Hay’adda World Vision oo Tababar U Soo xirtay 100 Arday-Sawiro
September 8, 2017 - By: Omar Akhyaar
Xaflad qalanjabin ah ayaa caasimadda Garoowe loogu qabtay 100 arday oo isugu jira rag iyo haween, kuwasoo dhamaystay tababar lix bilood socday oo ay ku baranayeen xirfadaha ganacsiga, waxaana tababarka bixinaysay hay’adda World Vision xafiiskeeda Puntland.
Xafladda Qalanjabinta waxaa ka qaybgalay Wasiir Ku-xigeenka Wasaarada shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiir Ku-xigeenka ganacsiga iyo warashadaha Puntland, Masuuliyiin ka socday Bangiga Amal, xubno ka socday mashruuca SBCF ee Bangiga aduunka iyo sidoo kale masuuliyiinta Hay’adda World vision.
“ ujeedada xafladan waxay la xiriirtaa sidii la isugu xiri lahaa ardayda baratay xifgadaha ganacsiga iyo hay’adaha bixiya daymaha oo ay ka mid yihiin Bangiga amal iyo Bangiga adduunka” sidaas waxaa tiri Sundus Daahir Cismaan oo ka tirsan howlwadeenadda Hay’adda World Vision, islamarkaana ka mida ah tababarayaasha mashruucan.
Wasiir K-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha Puntland C/risaaq shire Ismaaciil iyo Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda ganacsiga Puntland Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf oo hadalo kooban ka jeediyay munaasabada qalanjabinta ayaa u mahadceliyay hay’adda World Vision oo tababarka bixisay iyo Midowga Yurub oo maalgaliyay mashruucan kor loogu qaaday aqoonta ganacsatada Puntland.
” dowladda Puntland waxay mudnaanta kowaad siinaysaa oo dhiirigalinaysaa sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha ganacsiga ee ganacsatada iyo dadka doonayay inay ganacsi abuuraan, islamarkaana lagu isku xiro ganacsatada iyo hay’adaha bixiya daymaha” sidaas waxaa yiri Wasiir K/xigeenka Wasaaradda shaqaalaha.
Hay’adda Caalamiga ee World Vision oo ka howlgasha Puntland ayaa degmooyinka gobolka Nugaal ka wadaa mashruuca fududaynta iyo horumarinta ganacsiga yar yar iyo xoojinta hab nololeedka wanaagsan ee bulshadda, Mashruucan ayaa waxaa ka faa’iidaystay boqolaal qoys oo dan yar ah.